ဒန်ယဲလ် Amiee ဓါတ်ပုံများ (ထိုအစဉ်အဆက်သူမရဲ့မှဖြစ်ပျက်?)
ဒန်ယဲလ် Amiee: Big လူငယ်များသို့ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမားဓာတ်ပုံပြခန်း
ဂေါက် Channel ကို
ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမားဒန်ယဲလ် Amiee ၏တတိယရာသီပေါ်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ သည့် Big လူငယ်များသို့ ဂေါက်သီး Channel ကိုအပေါ်စီးရီး။ ကြောင်းရာသီ ... ကောင်းစွာ ... ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့ သည့် Big လူငယ်များသို့ III ကို ။
Amiee သူမနဲ့ Big လူငယ်များသို့ III ကိုပေါ်သည်ထင်ရှားအချိန် 28 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ သူမသည်ပြပွဲသမိုင်းအတွက်ပိုပြီးကှဲသွန်းအဖွဲ့ဝင်တဦးတည်း, စီးရီးအတွက်အချက်မှဆက်ဆက်အရှိဆုံးအငြင်းပွားဖွယ်သက်သေပြခဲ့သည်။
လာမယ့်တော်တော်များများစာမျက်နှာများကိုကျော်ကျနော်တို့ Amiee ပိုဓာတ်ပုံများရှုမြင်ပါလိမ့်မယ်နဲ့သူမရဲ့ Big လူငယ်များသို့ III ကိုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ကိုပြန်ကြည့်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်လာမယ့်သူမမှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကိုဂေါက်သီးဒန်ယဲလ် Amiee အပေါ်တစ်ဦး Polarized ကိန်းဂဏန်းကိုဖန်ဆင်း သည့် Big လူငယ်များသို့ III ကို ? သူမသည်တယောကြည့်ရုံ (သွန်းအိမ်ထောင်ဖက်အပါအဝင်) တချို့လူတွေမှားလမ်းပွတ်ကြောင်းသူ့ကိုယ်သူတင်ဆက်ထားပါတယ်တစ်အချို့သောလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် Amiee အထီးကြည့်ရှုတွေရဲ့ရန်၏ကြီးမားသောဆက်ပြောပါတယ်အပါအဝင်လည်းပရိသတ်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။
2005 ခုနှစ်တွင် Amiee ဟူမူကား, ထို့နောက် Futures ခရီးစဉ်အဖြစ်လူသိများသည့်ခရီးစဉ်၏ website တွင်သည်ထင်ရှားကြောင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်စီးရီးအပေါ်သူမ၏အနုတ်လက္ခဏာပုံဖော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြော:
"ငါက start ကနေနားလည်မှုလွဲခဲ့သည်ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အသားအရေအတွက်အဆင်ပြေတယ်, ဒါပေမယ့်ငါအချို့လူတွေကငါရှိသောကြောင့်ဟော်မုန်းလိုအပ်ချက်ကောက်ယူခဲ့သည်ထင်ထင် - ။ ငါသည်ဤအနည်းငယ်သာ Barbie-စတိုင်ဂေါက်သီးခဲ့ကြောင်းငါသည်စောစောပြပွဲပယ်ကန်ကိုဆည်းပူးခဲ့လျှင်။ ဒါကြောင့်တူကြပြီ '' ကိုကြည့်ပါ, ငါတို့သူမကပိုင်ပါဘူးသင်ကပြောကြားခဲ့သည်။ '' လူတွေအများအပြားငါ့ကိုအခွင့်အလမ်းပေးချင်ကြဘူး။ "ဘယ်လိုလူကြမ်းဖြစ်လာရန်အတိုဆုံးကောက်ရိုးဆွဲခဲ့တာလဲ တည်းဖြတ်ငါ့ကိုဒါ cocky ကိုကြည့်လုပ်လေ၏။ ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်ပေမယ့်ကောင်းသောဒရာမာခဲ့ပါတယ်။ "
ထိုအခါ '' Big လူငယ်များသို့ III ကို '' Winner Is ...
ဂေါက် Channel ကို, Big လူငယ်များသို့ III ကို, ဒန်ယဲလ် Amiee အပေါ်အများဆုံးအာရုံစိုက်မှု-ဖမ်းဆုပ်ဂေါက်သီးအတူကံကောင်းတယ်ကချန်ပီယံပွဲစဉ်အားလုံးကိုလမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ Amiee နောက်ဆုံးအတွက် Pamela Crikelair ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထိုအခါဆုရှင်ခဲ့ ...
Amiee Big လူငယ်များသို့ III ၏ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည် Crikelair ကျော်ချန်ပီယံပွဲစဉ် 2-နှင့်-1 အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Big လူငယ်များသို့အပေါ်ထင်ရှားကျော်ကြားသောမတိုင်မီက Amiee အနီးကပ် 30 ရက် Futures ခရီးစဉ်ဖြစ်ရပ်များမှကစား; နှင့်မီ, သူမ၏အပျော်တမ်းကစားသမားဘ (သူမဒန်ယဲလ် Skinner အဖြစ်ကစားရှိရာ) Long Beach ပြည်နယ် 22 ကောလိပ်ပြိုင်ပွဲပါဝင်သည်။ သူမ၏အမှတ်ပေးပျမ်းမျှအား LBSU မှာနှစ်နှစ်အတွက် 87 နှင့် 83 ခဲ့သည်။
Amiee 1999 ခုနှစ်တွင်လိုလားသူလှညျ့သူမသည် 2002 နှင့် 2003 ခုနှစ်ခရီးစဉ်ကိုချွတ်ခဲ့တယ်သူမသည် 2001 ခုနှစ် 2000 ခုနှစ်နှင့် 11 ခုနှစ် 14 ဖြစ်ရပ်များကစား 2000 ခုနှစ်အတွက် Futures ခရီးစဉ်ပူးပေါင်း, 2004 ခုနှစ်နှစ်ဦးကိုဖြစ်ရပ်များကစားများနှင့်နောက်ပိုင်းမဆိုကစားမထားပါဘူး။
2000 ခုနှစ် 14 Futures ခရီးစဉ်ဖြစ်ရပ်များအတွက်, Amiee 78,38 တစ်အမှတ်ပေးပျှမ်းမျှနှင့်အတူလေးဖြတ်တောက်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူမ၏အနိမ့်ပတ်ပတ်လည် 2001 ခုနှစ်တွင် 11 ဖြစ်ရပ်များခုနှစ်တွင် 73 ခဲ့တယ်, သူမနောက်တဖန် 76,73 တစ်အမှတ်ပေးပျှမ်းမျှနှင့်အတူလေးဖြတ်တောက်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူမ၏အနိမ့်လှည့်လည် 71 ခဲ့သည်။
Amiee 2004 ခုနှစ်တွင်ကစားနှစ်ခု Futures ခရီးစဉ်ဖြစ်ရပ်များနှစ်ခုလွဲချော်ဖြတ်တောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒန်ယဲလ် Amiee ရဲ့ LPGA Tour ကင်းလွတ်ခွင့်
Big လူငယ်များသို့ III ၏ဆုရှင်အဖြစ်, ဒန်ယဲလ် Amiee Kingsmill မှာ 2005 LPGA Michelob က Ultra ကိုဖွင့်ကစားရန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
Amiee ပထမဦးဆုံးပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ 79 သေနတ်နှင့်ဒုတိယအကျော့အတွက် 77 ထပ်ပြောသည်။ သူမသည်ဖြတ်လွဲချော်။
'' The Big လူငယ်များသို့ '' ပြီးနောက်ဒန်ယဲလ် Amiee
ယခင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဒန်ယဲလ် Amiee သူမနဲ့ Big လူငယ်များသို့ III ကိုအနိုင်ရတဲ့၏သီလအားဖြင့်ထဲသို့ဝင်ရသော Kingsmill မှာ 2005 LPGA Michelob က Ultra ပွင့်လင်းမှာ 14-ကျော်တန်းတူပစ်သတ်။
Amiee လည်း BB3 အနိုင်ရတဲ့၏သီလကြောင့်တစ်နှစ်တစ်စက္ကန့် LPGA ပြိုင်ပွဲသို့အနေနဲ့ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ သူမသည်မကောင်းတဲ့ပြန်ကိုးကားခြင်း, Corning ဂန္ထဝင်ကစားလို့ယူဆတယ်, ဒါပေမယ့်နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
ထိုအနည်းဆုံးဂေါက်သီးအဖြစ်, တော်တော်များများဒန်ယဲလ် Amiee ကြား၏နောက်ဆုံးအဘယ်သူကိုမျှပါပဲ။ အနည်းဆုံးအားလိုလားသူပြိုင်ပွဲအတွက်ပြိုင်ဘက်အဖြစ် - သူမကဂိမ်းကနေဆုတ်ခွာ, သောနောကျပျောက်ကွယ်သွားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
အဆိုပါအကြောင်းပြချက်မသိရသေးဖြစ်ကြသည်။ အများစုမှာ Big လူငယ်များသို့ဆုရရှိသူ (နှင့်အတော်လေးအနည်းငယ်အရှုံးသမား) တတ်နိုင်သမျှရှည်လျားသောအဘို့မိမိတို့ရုပ်မြင်သံကြားပွဲကိုနို့ညှစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါပြီ။ လုံးဝမီးမောင်းထိုးအပြင်ဘက်တွင်သူမ၏ဘဝနှင့်အတူပေါ်ရွှေ့ဖို့: Amiee အခြားလမ်းကြောင်းရွေးချယ်ခဲ့သည်။
တိုနီဘလဲ O'Neal ဓာတ်ပုံပြခန်း
Seve Ballesteros: စပိန်ဂေါက်သီးဧရာ Remembering
Claude သဟဇာတ Sr; ဇီဝ
ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမားက Tiger Woods နှစျစဉျငွေဘယ်လောက် Make ပါသလား?
Camilo Villegas '' စာဖတ်ခြင်းဂရင်းဘို့ '' ပင့်ကူလူသား '' နည်းလမ်း
သင့်ရဲ့မရှိမဖြစ် Rappelling ပစ္စည်း
သင်က Hybrid ကို Car တွင် Plug မှဖူးပါသလား?
တစ်ဦးဆိုင်ကယ် Pannier ဆိုတာဘာလဲ
Plus အား CA အပြောင်းအလဲ
စက်ရုံ Settings ကိုသင့်ရဲ့ Computer ကို Restore လုပ်နည်း
Reality Show ကိုအကြံအဖန်၏စွပ်စွဲချက်
1979 ခုနှစ်၏ထိပ်တန်းဆယ်ပါး Oldies သီချင်းများ
အဆိုပါသင်ခန်း၏ The Dark Side
အဆိုပါပုံမှန် 10th အဆင့်သင်္ချာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း
သင်ကစတင်ခဲ့သည် Get မှ 101 ဂန္တဝင်
တင်းနစ်အတွက် Forehand ပြုပြင်ခြင်း
စပိန်၏ဘာသာစကားများကိုစပိန်မှ Limited မ
'' အစဉ်အဆက်ကစားအကြီးမြတ်ဆုံးဂိမ်း '' နာမည်ကြီးအရှုံးသမားဂေါက်သီးပုံပြင်ပြောပြ
ငါ Paint ငါ၏စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပါတယ်။ မဆိုအကြံပြုချက်များ?
Ceratopsians - ဦးချို, ရိုးရှင်းသောဒိုင်နိုဆော
စာရေးသူကိုယ်ရေးဖိုင်: ဖြစ်သူ Scott Cunningham